Ilay lehilahy nahatonga ny fisian’ny tetikasa Lingua tato amin’ny Global Voices? · Global Voices teny Malagasy
Ilay lehilahy nahatonga ny fisian'ny tetikasa Lingua tato amin'ny Global Voices?
Voadika ny 25 Jona 2019 7:51 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2014)
Namoaka ity tantara momba ny fihaonako tamin'ny Global Voices tao anatin'ny 10 taona ity aho, saingy tsapako fa mientanentana aho isaky ny miresaka momba izany.
Tamin'ny taona 2005, mpianatra nahazo mari-pahaizana tamin'ny sehatry ny Asa Fanaovan-gazety aho ary nahatsapa ho fanina aho tamin'ny zava-bita mampitolagagan'ny orinasan'ny fampitam-baovao tany Taiwan. Tsy fantatro raha tokony hanohy hanatratra ny tanjoko ho lasa mpanao gazety amin'ny fampitam-baovao nentim-paharazana aho na … tsy fantatro hoe inona ny safidy hafa.
Nanomboka nanoratra bilaogy aho ary nahafantatra fa misy tontolo vaovao hafa any an-kafa any. Nahita tampoka ny Global Voices aho, namaky lahatsoratra sasantsasany, ary gaga tamin'ny zava-baovaony sy ilay tambajotra. Tsy nisalasala aho fa nanomboka nandika lahatsoratra mahaliana maromaro izay novakiako tao amin'ny GV. Ity no fandikan-teny nataoko voalohany ary nametraka ny fanamarihako manokana aho mba hizarako izany amin'ny namako mibilaogy aty Taiwan. Tsy fantatro hoe iza no mety hamaky izany, saingy isaky ny fandikan-teny tsirairay izay nataoko dia nahatsapa fifandraisana tamin'ny olona eto amin'izao tontolo izao aho, ary tsy irery aho. Tiako ireo tantara izay maneho ny toe-javatra mitovitovy amin'izany tany Taiwan, satria nahatonga ahy hieritreritra momba ny fiheveran-disoko sy ny fahajambako izany. Tsy nitsahatra nandika lahatsoratra aho mandra-pahatongan'ny andro izay nahazoako hafatra avy any amin'i Rebecca MacKinnon, ilay mpiara-manorina anay, izay namaky ny teny Shinoa ary nanasa ahy hanatevin-daharana ny GV. Izany no nanombohan'ny zava-drehetra. Mitantana tetikasan'ny media vaovao maromaro aty Taiwan aho ankehitriny, mikasa ny hifanamby amin'ny fampitam-baovao manerantany aty Taiwan. Matoky tanteraka aho fa hanova ny fampitam-baovao ary noho izany hanorina indray ny tontolon'ny fampitam-baovao demaokratika satria izany no zavatra nianarako tao amin'ny GV.